सर्वश्रेष्ठ दन्त सिंचाई | कुन किन्ने? राय, मूल्य र तुलना
ओरल बी ओक्सीजेट
ओरल बी वाटरजेट
प्रो HC प्रिमियम
वाटरपिक WP 300 यात्री
फिलिप्स सोनिक्स डायमंड क्लेन
फिलिप्स सोनिकेयर हेल्दी व्हाइट
के तपाइँ दन्त स्वच्छता मा सबै भन्दा राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ? सामान्य ब्रश वा फ्लसिङको बारेमा बिर्सनुहोस् र डेन्टल इरिगेटर प्रयोग गर्न सुरु गर्नुहोस्। तिनीहरू प्रभावकारी, सुरक्षित, प्रयोग गर्न सजिलो छन् र दन्तचिकित्सकको धेरै भ्रमणहरू बचत गर्न सक्छन्।
यहाँ तपाईंले मौखिक सिंचाईकर्ताहरूमा सबैभन्दा पूर्ण र निष्पक्ष जानकारी पाउनुहुनेछ: तुलना, विश्लेषण, राय र मूल्यहरु सबै भन्दा राम्रो मोडेल र ब्रान्ड को ताकि तपाईं आफ्नो आवश्यकता र बजेट सबै भन्दा राम्रो सूट एक छनोट गर्न सक्नुहुन्छ। विवरण नगुमाउनुहोस् र आफ्नो उत्तम मुस्कान प्राप्त गर्नुहोस्!
यी दुई तालिकाहरूसँग एकै नजरमा उत्कृष्ट डेस्कटप वा ताररहित उपकरणहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू तुलना गर्नुहोस्।
सर्वश्रेष्ठ टेबलटप सिंचाई तुलना
Oralteck संयुक्त राज्य अमेरिका
मूल्य उपलब्ध छैन
उत्तम यात्रा सिंचाई तुलना
बिक्री मा नम्बर 1
दन्त सिंचाई तुलना
मौखिक सिंचाई के हो?
कुन दन्त सिंचाई किन्न?
उत्तम दन्त सिंचाई के हो?
अहिले बजारमा सयौं मोडल छन् तर यी हुन् 10 उत्तम मौखिक सिंचाईकर्ताहरू (डेस्कटप र ल्यापटप) र स्पेनिश प्रयोगकर्ताहरूको मनपर्ने:
वाटरपिक WP-100 - को उत्पादन ...
10 दबाव स्तर 100 Psi सम्म
7 हेडहरू समावेश छन्
विशिष्ट माउथपीस प्रत्यारोपण, अर्थोडन्टिक्स, आदि।
३६० डिग्री घुम्ने टिप
650 एमएल जलाशय
यद्यपि यो कम्पनीको शीर्ष-अफ-द-रेन्ज मोडेल होइन, WP-100 हो सबैभन्दा धेरै बेच्ने दन्त सिंचाई वर्षौंदेखि हाम्रो देशमा।
यो हाइड्रोपल्सर मौखिक स्वच्छतामा विश्वको अग्रणी ब्रान्ड हो dentists द्वारा सिफारिस गरिएको, को छाप छ ADA (अमेरिकन डेन्टल एसोसिएसन) र यसको प्रभावकारिता रहेको छ वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित।
तपाईंका विनिर्देशहरू भेट्छन् कुनै पनि प्रयोगकर्ताको आवश्यकता, विशेष गरी किनकि यसले सबै आवश्यकताहरूको लागि नोजलहरू समावेश गर्दछ।
वाटरपिक WP-660 Aquarius
सफाई र गम मालिश प्रकार्य
El WP-660 सिंचाई खोज्नेहरूका लागि हाम्रो सिफारिस हो गुणस्तरको र समायोजित मूल्यको साथ धेरै पूर्ण। यो एक मध्यम मूल्य दायरामा छ, यो अग्रणी ब्रान्ड बाट हो र यसको विशिष्टता र उपकरण कुनै पनि प्रयोगकर्ताको लागि उत्कृष्ट छन्।
यो हाइड्रोपल्सर छ विभिन्न पावर स्तरहरू, सबै प्रकारका आवश्यकताहरूको लागि नोजलहरू र बजारमा सबैभन्दा धेरै पेटेन्ट भएको कम्पनीबाट उत्कृष्ट प्रविधिहरू।
ओरल-बी अक्सिजेट डेन्टल इरिगेटर...
5 दबाव स्तर 51 Psi सम्म
4 हेडहरू समावेश छन्
600 एमएल जलाशय
पर्खाल वा टेबल माउन्ट
Day० दिने परीक्षण
ब्राउनले दन्त स्वच्छता र संसारमा राम्रो प्रतिष्ठा निर्माण गरेको छ तिनीहरूका सिंचाईहरू पनि बजारमा उत्कृष्ट छन्.
El ब्राउन द्वारा ओक्सीजेट एक उत्तम बिक्रेता हो कि एक सफाई प्रणाली को लागी बाहिर खडा छ कि शुद्ध हावा संग एक दबाव पानी जेट संयोजन, जसले टोलीलाई ए संवेदनशील गम भएका व्यक्तिहरूको लागि उत्कृष्ट विकल्प.
सामान्यतया, यो एक धेरै पूर्ण उपकरण हो र प्रयोगकर्ताहरू यसले प्रस्ताव गर्ने परिणामहरूसँग सन्तुष्ट छन्। यो उल्लेख गर्न लायक छ अधिकतम दबाव धेरै उपकरणहरू भन्दा कम छतर मौखिक बी बाट उनीहरूले हामीलाई जानकारी दिएका छन् कि यो उनीहरूको अध्ययन अनुसार सल्लाह छ।
ओरल बी ओक्सीजेट विश्लेषण
Aquapik 100 - दन्त सिंचाई ...
10 दबाव स्तर 130 Psi सम्म
२ बर्षे वारेन्टी
यदि तपाईंसँग तंग बजेट छ भने, तपाईंले राम्रो मौखिक सिंचाई छोड्नु पर्दैन किनकि त्यहाँ बजारमा धेरै विकल्पहरू छन् जसको मूल्यहरू सबै बजेटको पहुँच भित्र छन्। हामी तिनीहरूसँग भएको यो मोडेललाई हाइलाइट गर्न चाहन्छौं धेरै राम्रो प्रयोगकर्ता सन्दर्भहरू कसले यो प्रयास गरेको छ र यसले के प्रस्ताव गर्दछ २ बर्षे ग्यारेन्टी
Oralteck Usa ब्रान्ड बाट Aquapik हो ADA प्रमाणित, उत्कृष्ट विशिष्टताहरू, सबैभन्दा पूर्ण उपकरणहरू र ए वास्तवमै समायोजित मूल्य प्रतियोगिता सापेक्ष।
प्रो-एचसी पानी प्रणाली
मौखिक वा दाँत सिंचाई ...
5 दबाव स्तर 75 Psi सम्म
11 हेडहरू समावेश छन्
1100 एमएल जलाशय
अर्को आर्थिक हाइड्रोप्रोपेलर जुन बाँकी भन्दा माथि खडा छ त्यो ब्रान्डको उपकरण हो प्रो-एचसी, विशेष गरी पानी प्रणाली प्रिमियम, जुन हामीले हाम्रो वेबसाइटमा पनि विश्लेषण गरेका छौं।
यो एक उत्पादन हो यो समावेश टाउको संख्या र यसको आधारभूत तर प्रभावकारी र सरल सञ्चालन मा सबै भन्दा माथि खडा छ। मौखिक स्वच्छता सुधार गर्न को लागी, यसको लागि दुई टाउको छ नाक सिंचाई।
पानी प्रणाली प्रिमियम विश्लेषण
वाटरपिक ४५०- ओरल इरिगेटर...
2 दबाव स्तर 75 Psi सम्म
210 एमएल जलाशय
यसको औसत मूल्य भन्दा माथि भए पनि, Wp-450 यो हाम्रो देशमा सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने पोर्टेबल हाइड्रोपल्सरहरू मध्ये एक हो। यसको पूर्ण विनिर्देशहरू र ब्रान्डको अनुभवले यसलाई सुरक्षित शर्त बनाउँछ।
मा औसत भन्दा माथि उभिएको छ सामग्रीको राम्रो गुणस्तर, ट्याङ्कीको ठूलो क्षमता, ब्याट्रीको अधिक स्वायत्तता र यसमा विशेष नोजलहरू समावेश छन्। प्रत्यारोपण र अर्थोडोन्टिक्स को लागी।
Panasonic EW1211W845 इरिगेटर...
85 Psi र 1400 पल्स प्रति मिनेट सम्म दबाब
३ मोड (एयर इन नर्मल, एयर इन सफ्ट, जेट)
2 हेडहरू समावेश छन्
130 एमएल जलाशय
सबै भन्दा राम्रो Panasonic सिंचाईकर्ताहरू तिनीहरू ब्याट्री मोडेल हुन् र यो ताररहित मौखिक सिंचाई हो बजार मा सबै भन्दा राम्रो गुणस्तर मूल्य संग उपकरणहरु मध्ये एक। यस रूपमा यसलाई राखिएको छ हाम्रो देश मा सबै भन्दा राम्रो बिक्रेता मध्ये एक, वाटरपिक भन्दा माथि।
यो संग एक उपकरण हो राम्रो शक्ति र मौखिक स्वच्छता मा धेरै राम्रो परिणाम को लागी तीन अपरेटिंग मोड। अन्य मोडेलहरूको तुलनामा मात्र हानि भनेको ट्यांकको कम क्षमता हो, जसलाई यसलाई धेरै पटक रिफिल गर्न आवश्यक छ।
थप Panasonic dental irrigators हेर्नुहोस्
वाटरपिक WP-300 यात्री
पानी पिक - पानी पिक WP300 ...
3 दबाव स्तर 80 Psi सम्म
450 सेकेन्डको लागि 60 मिलीलीटर जलाशय
यसको नामले सुझाव दिन्छ, WP 300 को एक मोडेल हो एक डिजाइन र सुविधाहरू भएको डेस्कटप जसले यसलाई हामी जहाँ पनि यात्रा गर्न सजिलो बनाउँछ.
यसका लागि उनीहरुसँग छ यसको आकार घट्यो र तिनीहरूले यसलाई यस्तो तरिकामा डिजाइन गरेका छन् समावेश सानो यात्रा झोला मा भण्डारण गर्न सकिन्छ।
पनि छ विभिन्न देशहरूको पावर ग्रिड संग अनुकूलता, यसलाई ब्याट्री मोडेलहरूको लागि राम्रो पोर्टेबल विकल्प बनाउँदै।
वाटरपिक यात्री विश्लेषण
Oral-B PRO 3000 - स्टेशन...
को लागी 2-in-1 मौखिक सिंचाई सिंचाई र ब्रश संग दन्त निर्विवाद नेता यो ब्रान्ड हाइड्रोपल्सर हो ओरल-बी। एउटै किटमा हामीले ए प्रमुख ब्रान्ड इलेक्ट्रिक टूथब्रश र प्रत्येक ब्रश पछि मौखिक सिंचाई गर्न हाइड्रोपल्सर।
हामी अर्को 2-in-1 मोडेललाई पनि बिर्सन चाहँदैनौं जुन हामीले विश्लेषण गरेका छौं वाटरपिक WP900। यद्यपि यो प्रयोगकर्ताहरू माझ धेरै लोकप्रिय छैन, यो कम्पनी द्वारा बजार मा सबै भन्दा राम्रो दन्त सिंचाई संग निर्मित छ।
यदि तपाईंसँग अझै पनि विद्युतीय टूथब्रश छैन भने, यो सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो घरमै दाँतको पूर्ण स्वच्छता पाउनुहोस्।
Sowash: मोटर बिना नल सिंचाई
SOWASH दाँत सिंचाई...
के तपाइँ एक गैर-मोटर चालित बूस्टर चाहानुहुन्छ जसले आवाज नगर्ने र विद्युतीय शक्ति खपत गर्दैन? Sowash सँग लगभग 100 राय र औसत स्कोर छ 4.2१० मा5over० भन्दा बढी यसलाई खरिद गरेका प्रयोगकर्ताहरू द्वारा।
यसको मूल्य अन्य मोडेलहरू भन्दा कम छ जुन ट्यापमा जडान गरिएको छ र यसको माथि छ सबै भन्दा राम्रो बिक्रेता र सबै भन्दा राम्रो मूल्यवान।
हाल त्यहाँ विभिन्न ब्रान्ड को सयौं मोडेल छन् विभिन्न विशिष्टता, डिजाइन र मूल्यहरु संग। यसले प्रत्येकको लागि राम्रो मौखिक सिंचाई छनोट गर्न गाह्रो बनाउँछ।
हाइड्रोपल्सरमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो प्रभावकारी छ ब्रस गरेपछि मौखिक गुहामा रहन सक्ने ब्याक्टेरिया र खाद्य मलबेको उन्मूलनमा।
यस आधारबाट सुरू गर्दै, त्यहाँ केही थप महत्त्वपूर्ण विशिष्टताहरू छन्, जस्तै दबाव सेटिङहरू वा ट्याङ्कीको क्षमता, र अन्य कम सान्दर्भिक जस्तै डिजाइन वा ध्वनि स्तर।
उत्तम मौखिक सिंचाई छनोट गर्न गाइड
यी हुन् मुख्य विशेषताहरू विचार गर्न आफ्नो लागि उत्तम सिंचाई छनोट गर्न:
सुरुमा, सबैभन्दा सामान्य डेस्कटप मोडेल छनोट गर्न हो बिजुली पम्पको साथ, तर त्यहाँ मानिसहरु छन् जो एक रुचाउँछन् पोर्टेबल दन्त सिंचाई यसलाई आफ्नो यात्रामा लिन वा इन्जिन बिना एउटा पनि।
दबाब र दन्त शावर मोडहरू
हामीलाई सही सफाई प्रदान गर्ने मुख्य विशेषताहरू मध्ये एक हो पानी जेटको शक्ति र गुणस्तर। हाम्रो सिफारिस छनोट गर्न हो मोडेलहरू जसमा उच्चतम सम्भावित शक्ति छ तर सधैं समायोज्य हुन्छ, यसलाई हाम्रो आवश्यकता अनुसार समायोजन गर्न सक्षम हुन। उच्च तर अनियमित शक्ति केही व्यक्तिहरूको लागि कष्टप्रद हुन सक्छ।
विभिन्न शक्तिहरू बाहेक, पनि त्यहाँ पानी को विभिन्न जेटहरू छन् र संग उपकरणहरू प्रयोग को विभिन्न मोड चयन गर्न सम्भावना। साथमा जेटहरू छन् प्रति मिनेट थप धड्कन, जाने जेटहरू हावा बुलबुले संग मिश्रित र squirt पनि मालिश मोड।
केही मोडेलहरूमा ट्याङ्कीको आकार यो पूर्ण सफाईको लागि पर्याप्त छैन, त्यसैले तपाईंले यसको समयमा केहि समय पुन: भर्नुपर्छ। यो सुरुमा महत्वहीन देखिन्छ तर समय संग कष्टप्रद बन्न सक्छ, विशेष गरी यदि यो धेरै सानो छ र तपाईंले प्रति प्रयोग धेरै पटक भर्न आवश्यक छ।
स्वस्थ दाँतका लागि मानक मुखपत्रहरूका अतिरिक्त, अर्थोडन्टिक्स प्रयोग गर्ने वा दन्त प्रत्यारोपण गर्ने प्रयोगकर्ताहरूका लागि विशिष्ट मुखपत्रहरू छन्। यदि हामी राम्रो नतिजा प्राप्त गर्न चाहन्छौं भने, हामी तपाइँलाई तपाइँको लागि उत्तम सिंचाई छनोट गर्दा यसलाई ध्यानमा राख्न सल्लाह दिन्छौं।
यो पनि उल्लेख गर्न लायक छ कि त्यहाँ निश्चित नलिका र साथ मोडेलहरू छन् घुम्ने र मुखको सबै क्षेत्रहरूमा सजिलो पहुँच अनुमति दिने मुखपत्रहरू।
स्पेयर पार्ट्स र / वा सहायक उपकरणहरूको उपलब्धता
हाइड्रोपल्सर छनोट गर्नु अघि तपाईंले यो सुनिश्चित गर्नुपर्छ कम्तिमा प्रतिस्थापन नोजलहरू उपलब्ध छन् जुन तपाईलाई चाहिन्छ। यी नोजलहरूसँग केही महिनाको उपयोगी जीवन छ तिनीहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक छ, टूथब्रश जस्तै।
मान्यता प्राप्त ब्रान्डहरूबाट मोडेल खरिद गर्दा स्पेयर पार्ट्स हुनेछ भन्ने ग्यारेन्टी दिन्छ लामो समयको लागि उपलब्ध।
शोर स्तर र डिजाइन
यद्यपि तिनीहरूको विशेषता हो कार्यसम्पादनलाई प्रत्यक्ष असर नगर्नुहोस् मौखिक सिंचाई गर्ने व्यक्तिहरू छन् जसले दुवै पक्षहरूमा धेरै महत्त्व राख्छन्। संचालित सिंचाईमा आवाज अपरिहार्य छ, तर यो सत्य हो केही ग्याजेटहरू अरूहरू भन्दा बढी हार्दिक छन्। यदि तपाई के चाहानुहुन्छ भने मौखिक सिंचाई को समयमा पूर्ण मौन तपाईले मोटर बिना मोडेल मध्ये एक छनोट गर्नुपर्नेछ जुन ट्यापमा जोडिएका छन्।
डिजाइन को विविधता महान छ, छनोट गर्न सक्षम हुनु विभिन्न रंग र विभिन्न आकारहरू। यात्राका लागि डिजाइन गरिएका केही कम्प्याक्ट बेन्चटप थ्रस्टरहरू पनि छन्, जस्तै वाटरपिक wp-300 यात्री। केही उपकरणहरू भित्तामा झुण्ड्याउन सकिन्छ, सानो ठाउँमा प्रशंसा गर्न सकिने कुरा।
दन्त सिंचाई मूल्य र वारेन्टी
सिँचाइकर्ताहरूको प्रभावकारिता र प्रयोगकर्ताहरूको सामान्य सन्तुष्टिले हालका वर्षहरूमा माग बढेको हो। माग बढ्दै जाँदा, अनगिन्ती नयाँ निर्माताहरू देखा परेका छन् जुन बजारमा सुरू भएका छन् प्रतिलिपिहरू सबै भन्दा राम्रो ब्रान्डहरु को। यी ब्रान्डहरू तिनीहरूसँग कुनै अनुभव वा ग्यारेन्टी छैन दक्षता जस्तै वाटरपिक, जसलाई ADA द्वारा अनुमोदित गरिएको छ र 30 भन्दा बढी वर्षदेखि यसको प्रविधिहरू नवाचार र पेटेन्ट गर्दै आएको छ।
यो स्पष्ट छ कि सबैले बजार मा सबै भन्दा राम्रो मोडेल किन्न सक्दैन, तर घास सस्तो दन्त सिंचाई जसले धेरै राम्रो नतिजा दिन्छ। हाम्रो वेबसाइटमा तपाईले राम्रो गुणस्तर र धेरै राम्रो प्रयोगकर्ता राय संग एक भन्दा बढी पाउन सक्नुहुन्छ।
अन्य प्रयोगकर्ताहरूको राय जसले मौखिक सिंचाईको प्रयास गरेका छन् यसले के परिणाम दिन्छ जान्नको लागि राम्रो सन्दर्भ हो। प्रत्येक व्यक्ति फरक छ, तर धेरै मूल्याङ्कन भएको र उच्च औसत अंक प्राप्त गर्ने हाइड्रोपल्सरले हामीलाई निराश पार्ने सम्भावना छैन।
उत्तम मौखिक सिंचाईहरू हेर्नुहोस्
ओरल इरिगेटरहरूको सर्वश्रेष्ठ ब्रान्डहरू
सबै भन्दा माथि एक कदम वाटरपिक हो, विश्व नेता साथ दन्त सिंचाई मा दर्जनौं पेटेन्ट र वैज्ञानिक अध्ययनहरू जसले आफ्ना उत्पादनहरूलाई समर्थन गर्छ। यद्यपि यो उत्तम बिक्रेताहरू मध्ये एक हो, यो राम्रो बूस्टरहरूको साथ मात्र होइन।
सबैभन्दा प्रमुख ब्रान्डहरू र तिनीहरूका उत्कृष्ट मोडेलहरूको बारेमा सबै जानकारी पहुँच गर्न तिनीहरूलाई क्लिक गर्नुहोस्:
[su_row] [su_स्तम्भ आकार = »१/२″ केन्द्र =» छैन »वर्ग =»»]]
डेन्टल इरिगेटर भनेको के हो?
एक मौखिक सिंचाई वा दन्त नुहाउने एक मात्र उपकरण हो जुन एक प्रयोग गर्दछ दबाइएको पानीको स्पंदन गर्ने जेट खाद्य मलबे हटाउन र ब्याक्टेरिया पट्टिका que तिनीहरू दैनिक ब्रश गर्न प्रतिरोध गर्छन्।
यो विधिलाई चिनिन्छ मौखिक सिंचाई र प्राप्त गर्नुहोस् कठिन क्षेत्रहरूमा पुग्न मौखिक गुहाको, जस्तै इन्टरडेन्टल क्षेत्रहरू, गम लाइन वा periodontal पकेट।
दन्त सिंचाई कसरी प्रयोग गर्ने
सबै सिँचाइ गर्ने प्रणालीहरू धेरै समान छन् र मूल रूपमाaपानी ट्याङ्की, पम्प र नोजल जहाँ दबाव जेट लागू गर्न।
केहि मोडेलहरूले सुधारहरू समावेश गर्दछ जस्तै विभिन्न नोजलहरू, विभिन्न समायोज्य दबाव स्तरहरू, र मसाज वा दाँत सेतो गर्ने विकल्प पनि। बिभिन्न नोजलहरू मध्ये हामीले विशेषका लागि फेला पार्न सक्छौं अर्थोडोन्टिक्स, को लागि प्रत्यारोपण र पनि भाषिक.
ओरल इरिगेटरको बारेमा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
हाइड्रोपल्सरहरूको बारेमा सामान्य शंकाहरू
हाइड्रोपल्सर कहिले प्रयोग गर्न आवश्यक छ?
तिनीहरू सबैको लागि उपयुक्त छन् जसले आफ्नो घरमा राम्रो दाँतको स्वच्छता प्राप्त गर्न खोज्छ, यसरी रोक्न मद्दत गर्दछ मौखिक रोगहरु. तपाईंले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न कुनै पनि समस्या पर्दैन, र त्यहाँ बच्चाहरु को लागि मोडेल पनि छन्, तर सधैं यी अवस्थामा प्रयोग गर्नुपर्छ:
ब्रेसेस भएका बिरामीहरूलाई सफा गर्न गाह्रो हुन्छ
दन्त प्रत्यारोपण बिरामीहरू
gingivitis वा periodintitis संग रोगीहरु
मौखिक सिंचाई दिनको कति पटक प्रयोग गरिन्छ?
प्रयोग हुन सक्छ प्रत्येक दाँत माझ्नु पछि, जबसम्म यो प्रत्येक दुई घण्टा5मिनेट भन्दा कम छ
के ट्याप पानीले काम गर्छ?
सिंचाई गर्नेहरू सामान्य ट्याप पानी संग काम गर्नुहोस्, यो खनिज पानी वा कुनै additives प्रयोग गर्न आवश्यक छैन।
के धेरै व्यक्तिहरूले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छन्?
को नोजलहरू आदानप्रदानयोग्य हुन्छन् र सामान्यतया विभिन्न रंगहरूमा आउँछन्, त्यसैले एकल हाइड्रोपल्सर परिवारका विभिन्न सदस्यहरूद्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
के यो माउथवाश संग प्रयोग गर्न सकिन्छ?
यद्यपि यो आवश्यक छैन, माउथवाश थप्न सकिन्छ 1: 1 को अधिकतम अनुपातमा। यो बाइकार्बोनेट वा क्लोरीन जस्ता अन्य additives प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छैन।
मौखिक सिंचाईका प्रकारहरू
हामी हाल किन्न सक्छौं तीन प्रकार मौखिक सिंचाईका लागि उपकरणहरू:
टेबलटप सिंचाई: तपाईंले तिनीहरूलाई बिजुली नेटवर्कमा प्लग गर्न आवश्यक छ र तिनीहरू सबैभन्दा सामान्य छन्। सामान्य नियमको रूपमा, तिनीहरू प्रस्ताव गर्नेहरू हुन् राम्रो प्रदर्शन, प्रयोग को अधिक मोड र nozzles को संख्या। तिनीहरू मोडेल हुन सक्छन् साधारण वा दुई-मा-एक सिंचाई, जसले पनि समावेश गर्दछ बिजुली टूथब्रश.
पोर्टेबल इरिगेटर्स: तिनीहरू वायरलेस मोडेल हुन् एक रिचार्जेबल ब्याट्री समावेश। यदि तपाइँ यसलाई घरबाट टाढा लैजान चाहनुहुन्छ वा तपाइँको बाथरूममा थोरै ठाउँ छ भने यी उपकरणहरू उत्तम विकल्प हुन्।
मोटर बिना नल दन्त सिंचाई: यस प्रकारका उपकरणहरू तिनीहरू सबै भन्दा कम बेचेका छन्, तर तिनीहरूसँग केही फाइदाहरू छन्। साथ पर्याप्त तिनीहरूलाई सिधै ट्यापमा जडान गर्नुहोस् र तिनीहरूसँग मोटर नभएकोले, उनीहरूलाई शक्ति चाहिँदैन र तिनीहरू शोर गर्दैनन्.
मौखिक सिंचाई कहाँ किन्न?
चाहे तपाइँ यो मोडेल वा कुनै अन्य छनौट गर्नुहोस् हाम्रो सिफारिस यसलाई अमेजनमा अनलाइन किन्न हो। छ धेरै ब्रान्डहरू, सबै भन्दा राम्रो अनलाइन मूल्य, सस्तो र छिटो ढुवानी र तपाईं पनि समस्या बिना आफ्नो खरिद फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले उनीहरूसँग वर्षौंदेखि काम गरिरहेका छौं र हामीलाई कुनै समस्या भएको छैन।
सर्वश्रेष्ठ बिक्री मौखिक सिंचाई
हामीले तपाईलाई बजारमा उत्कृष्ट मोडेलहरू कुन हो भनेर बतायौं, तर यी उत्पादनहरू सधैं उत्कृष्ट बिक्रेताहरूसँग मेल खाँदैनन्। तल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छaसूची जुन क्षणको सबैभन्दा धेरै बेच्ने दन्त सिंचाईकर्ताहरूसँग स्वचालित रूपमा अद्यावधिक हुन्छ:
ओरल-बी अक्सिजेट डेन्टल इरिगेटर... सुविधाहरू हेर्नुहोस् १,०21.017। समीक्षा सम्झौता हेर्नुहोस्
पोर्टेबल ओरल इरिगेटर... सुविधाहरू हेर्नुहोस् १,०11.466। समीक्षा सम्झौता हेर्नुहोस्
पोर्टेबल ओरल इरिगेटर... सुविधाहरू हेर्नुहोस् १,०5.556। समीक्षा सम्झौता हेर्नुहोस्
एपिकर डेन्टल इरिगेटर... सुविधाहरू हेर्नुहोस् १,०10.990। समीक्षा सम्झौता हेर्नुहोस्
मौखिक दन्त सिंचाई... सुविधाहरू हेर्नुहोस् १,०524। समीक्षा सम्झौता हेर्नुहोस्
ट्युरवेल ओरल इरिगेटर,... सुविधाहरू हेर्नुहोस् १,०3.431। समीक्षा सम्झौता हेर्नुहोस्
सबै भन्दा राम्रो	ओरल-बी अक्सिजेट डेन्टल इरिगेटर...
मूल्य गुणस्तर	पोर्टेबल ओरल इरिगेटर...
हाम्रो मनपर्ने	पोर्टेबल ओरल इरिगेटर...
एपिकर डेन्टल इरिगेटर...
मौखिक दन्त सिंचाई...
05 / 08 / 2019 मा 00: 50
म मेरो वाटरपिक सिंचाईको लागि चुम्बकीय प्लग कहाँ किन्न सक्छु ????
07 / 08 / 2019 मा 09: 03
नमस्ते मारिया। तपाइँ तपाइँलाई मद्दत गर्न को लागी मोडेल उल्लेख गर्नुहुन्न। जे भए पनि, वेबमा तपाइँसँग स्पेनको ब्रान्डको प्राविधिक सेवाको डेटामा पहुँच छ।
17 / 12 / 2019 मा 11: 14
एकदमै पूरा लेख !! तिनीहरूले ट्यापमा जडान हुनेहरूको दाँत सिंचाई गर्ने साधन पनि उल्लेख गर्छन् 🙂 (म तिनीहरूलाई माया गर्छु)। मैले सो धुने प्रयोग गरेको छु र सत्य यो हो कि गुणस्तर हो ... नियमित रूपमा पानी अन्य चीजहरू बाहेक ट्यापको जडानबाट बाहिर निस्कन्छ। ट्याप डेन्टल इरिगेटरहरू मन पराउनेहरूका लागि, त्यहाँ अन्य ब्रान्डहरू छन् जुन सो वाश भन्दा राम्रो छन्, जस्तै क्लेर ..., ब्यान ...
सिँचाइको मजा लिन र समय समयमा दन्त चिकित्सकमा जान नबिर्सनुहोस् कि एउटा चीजले अर्कोलाई लिदैन 🙂
17 / 12 / 2019 मा 14: 32
धेरै धेरै धन्यवाद Ana, हामी वस्तुनिष्ठ र गुणस्तरीय सामग्री सिर्जना गर्न प्रयास गर्छौं। अभिवादन
इरिगेटर्स ब्ल्याक फ्राइडे
दाँत सिंचाई 2022 - गोपनीयता नीति - कुकीहरूको बारेमा जानकारी